Ma Raadineysaa Waqtiga ugu Fiican Waqtiga oo dhan? Liiskan Adiga Ayaa Ah - Kale
67 Ka Mid ah Bandhigyada Anime ee Ugu Fiican Waqtiga oo dhan (Majiro Dalab Kala Duwan)
Maxaa qeexaya 'anime ugu fiican' waqtiga oo dhan?
Jawaabta ugu macquulsan waxay ku saleysan tahay qiimeynta iyo dib u eegista ka socota goobaha sida MAL (MyAnimeList).
Dhibaatada taasi waa: waxay ku egtahay dhagaystayaasha MAL. Faallooyinka qaarkoodna maaha waxa aan u qaadan lahaa dib u eegista 'dhabta ah'. Waa uun cabashooyinka carruurnimada ee ka yimaada taageerayaasha anime.
Markaa waad leedahay doorashooyinka anime ee ay Japan maamusho , uruurinta wax aan ka badnayn 10,000-100,000 + cod guud ahaan. Tiro yar marka aad tixgeliso 50-100 milyan ee taageerayaasha adduunka oo dhan.
Sababtaas awgeed, ma jirto hab dhammaystiran oo lagu xalliyo doodahan shakhsiga ah.
Marka taas ayaa leh… Halkan waa liistadayda anime-ga ugu weyn ee waqtiga oo dhan!
Anime oo aan dareemayo inay yihiin kuwa ugu fiican, uguna qalma dhammaan ama in ka badan amaan ay helayaan.
67 Anime Ugu Fiican Waqtiga oo dhan (Majiro Nidaam Darajo):
Monster si fiican ayuu wax u qabtaa: muuji 'bahalka gudaha' dhammaanteen.
Waxa kaliya ee ay qaadataa waa qaldan xaalado si qof ugu kiciyo waddo mugdi ah. Ku baraarujinta shar aan waligeen isku maleynaynin inaan awoodno.
Waxoogaa anime ah ayaa macquul ah.
Violet Evergarden iftiimay sababta oo ah qalbigeeda, sheeko shucuur leh.
Kaliya ma dareemaysid u damqasho dabeecadda weyn, sidoo kale waxaad u dareemeysaa jilayaasha taageerada ee muujiya jidka.
Violet Evergarden waxay isku daraysaa muuqaalo qurux badan, animation la yaab leh, iyo sheekooyin awood leh dhamaantood hal kubad oo weyn.
3. Clannad: Sheeko kadib
Clannad xilli 1 wuu fiicnaa, laakiin xitaa ma isbarbardhigto weynaanta xilli 2.
Sida Violet Evergarden, Clannad Ka dib Sheekada waxaa ka buuxa xanuun iyo murugo. Labadaba yar anime waxay awoodeen inay si fiican u sawiraan.
Jormungand waa anime kaliya ee noociisa ah oo lagu soo bandhigo nolosha ganacsatada hubka. Xaqiiqda sheekada ka sheekeynta, khibradaha, iyo qaab nololeedka ay hogaaminayaan ganacsatada hubka ayaa qarka u saaran.
Anime-kani waa farshaxan heer sare ah oo loogu talagalay waxa ay qabato iyo ku talagalku inuu sameeyo.
Madoka Magica ayaa soo gashay sawirka waxayna ku tiri: 'f * ck all this cliché sixir girl bullsh * t, waa waqtigii wax la ruxin lahaa'.
Taasi waa waxa sameeya Madoka Magica si wanaagsan. Halkii laga raaci lahaa wadada caadiga ah, waa jebiyey heshiis oo noocyada u beddelay wax mugdi iyo dhib leh.
6. Lagoon Madoow
Sida Jormungand, Black Lagoon waa mid ka mid ah anime-yaasha ugu caansan meeraha.
Dabeecad kastaa waxay leedahay waayi hore dhibaato leh oo laxiriira kufsi, xadgudub galmo, daroogo, fal dambiyeed, iyo waxkasta oo hoosta lagu matalo
Black Lagoon waxay ku fiican tahay waaxdan. Ficilkuna wuu iska hadlaa.
Psycho Pass wuxuu cilmi-baaris ka raadsadaa aragtida saraakiisha booliska iyo sharciga. Oo yaan la iloobin tiknoolajiyadda taasi tahay sidaa darteed ka hor waqtigeeda taxanahan anime.
Waxaa jira taxane bilays oo yar sida ay tahay adduunyada anime, iyo Psycho Pass waxay ka dhigeysaa mid xiiso leh in la daawado iyada oo aan la helin.
U yeerida 'Psycho Pass' 'asalka ah' waa mid aan macquul aheyn. Ma jiraan wax isbarbardhigaya waxa ay qabato.
8. Seef Art Online
Seefta Farshaxanka Tooska ah ayaa madaxa ka saran aad u badan. Xaqiiqdii taasi waa sidaan ku ogaaday. The neceb xiisaha iga dhigay.
Maxay SAO sida ugu fiican u qabataa waa isku darka ciyaaraha iyo xaqiiqda dalwaddii, iyo sameynta xoogaa mugdi ah si ay wax uun ugu dhadhamiyaan.
Dhanka ciyaaraha iyo VR, ma jiro wax anime ah oo ku soo dhowaanaya waxa SAO u taagan tahay. Guushiisuna waa ka badan tahay mid loo qalmo.
Waa anime ka hor waqtigiisa.
Iyo Seefta Farshaxanka Tooska ah: Qaadashada ayaa ah tan ugu wanaagsan ee aan ka aragnay taxanaha SAO illaa iyo hadda.
9. Akame Ga Dila
Akame Ga Dila waa maxay waxa dhaca marka muwaaddiniinta waddanku ay ku kacaan dowlad khiyaano, anshax xumo iyo bulsho.
Tani waa waxa Akame Ga Kill ku saabsan yahay, waxayna ka dhigeysaa ujeedkeeda mid cad oo naxariis daro ah, ficil xoog leh, iyo qaar ka mid ah ugu fiican la dagaallamaan muuqaalada anime ay bixiso.
Waa wax yar oo aan caadi ahayn sidoo kale habka ay u maamusho jilayaasha waaweyn (iyo dhimashadooda).
Shiki wuxuu ku bilaabmayaa si gaabis ah, laakiin aakhirka noqo wax aad u madow, khalkhal iyo anshax xumo, oo aanad garanayn waxa aad ka fikirto.
Waa cunsurkan aan ugu jeclahay Shiki. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu xumaa ee abid dhaca.
Dhinaca kale, Hinamatsuri ayaa kaa dhigi doonta inaad ka qosliso qosolkeeda majaajillada qosolka badan.
Dhanka kale, anime ayaa kuu soo dhawayn doona oohinta oohin.
Dhamaan anime-yada aan daawaday, in yar ayaa maamuli karta inay muujiyaan majaajillo iyo 'murugo' sifiican la'aan qulqulaya kan kale.
Taasi waa waxa iga dhigaya Hinamatsuri mid gaar ah.
Dragons oo la nool bini'aadamka hal abuur kaligeed ma leh. Laakiin sida anime u fuliyo fikraddan una beddelo majaajillo qosol badan, oo ay weheliso xubno ka mid ah 'nolosha qaybteeda' ayaa xiiso leh.
Wayna u egtahay wanaagsan samaynaya.
13. Liin dhanaan
Mid ka mid ah anime-yada yar ee wax looga qabto fikradaha adag sida niyad-jabka iyo is-dilka.
Sababtaas darteed keligeed, iyo sidee waxaa lagu sawiray bilaw ilaa dhamaad waa mid shucuur leh oo la iska indhatiri karo.
Waan ku faraxsanahay animation-ka gaarka ah sidoo kale.
DBZ waa nooc. Waa sababta warshadaha anime-ka xitaa u jiraan heer caalami ah.
Ma jiraan wax kale oo la dhaho.
Bleach ahaan asal ahaan waa DBZ iyadoon lahayn xarfaha OP.
Ka dhah waxa aad ka rabto Bleach, laakiin wax anime ah weligood kuma beddeli karaan waxa ay qabtaan.
La xiriira: Xigashooyinka Anime ee ugu Weyn ee Ka Soo Baxay Biliijka Taagan Imtixaanka Waqtiga
16. Saaxiibka Sixiroolaha
Witch duulaya waa kan ugu fudud, ugu nasasho taxane aan waligay daawaday.
Looma baahna ereyo, adeeg faneed ama waxyaabo aan macno lahayn oo lagu arko anime-kaaga maalinlaha ah. Taasina waa tan ka dhigaysa Flying Witch.
Waa waxa ugu dhow telefishanka 'dhabta ah', marka laga reebo inuu animated yahay.
17. Aroosadeeydu Waa Meeris
Taxanaha anime ee hoosta ka xariiqan oo aan helin jacayl badan ama aqoonsi.
Waqtigeeda majaajillada (iyo qosolka) waa qaar ka mid ah kuwa sida ugu wanaagsan loo qabtay waligey lama soo kulmin.
Waa majaajillo asal ah oo iyada lafteedu gaar u ah.
18. Sheeko Gaaban
Fairy Tail wuxuu leeyahay waxyaabaha ugu fiican ee anime soo bandhigi karo. La barbardhigi karo bandhigyada sida DBZ.
Weligay ma arag jilayaal badan oo xusuus mudan isla markaana qiimo leh isla waqtigaas.
Asal ahaan waa silsiladdii Shounen ee aan ugu jeclaa qarniga 21-aad.
19. Nolosha musiibada ee Saiki K
Mid ka mid ah majaajilooyinka ugu qosolka badan, ugu hal abuurka badnaa sannadihii la soo dhaafay. Waan jeclahay inay caydo koobabka caadiga ah, la'aan runti ku talaabsiga dhulkaas.
20. Re Zero: Bilaabida Nolol Adduunyo Kale
Anime kale oo aflagaadeeya koobabka caadiga ah, oo aan si dhab ah isaga qaadin.
Iyo dhinacyada qotada dheer, mugdiga, cilmu-nafsiga ah ee 'Re Zero' ayaa ka dhigaya anime kaa dhigaya inaad ka fikirto.
La xiriira: 5 Sababood oo Fudud oo Emilia uga fiicantahay Rem Re Reero
21. Higurashi: Markay Ooyaan
Higurashi waa sida hal tijaabo oo saynis oo weyn. Suurtagal ma ahan in la ogaado waxa xigi doona, iyo sida ay wax noqon doonaan.
Taxanaha naxdinta, waa mid aan la saadaalin karin, xariif ah, iyo mid ka mid ah fekerka ugu badan.
22. Tanaka Kun Had iyo Jeer Liis Ma Leh
Anime fudud oo leh majaajilo fudud. Waa wax fudud in ay tahay wax lagu qoslo, Tanaka Kunna waa nasasho ku filan si aad ugu seexato
Qayb nolosha ka mid ah oo diiradda saareysa fikradaha sida is-hagaajinta, koritaanka, maskaxda iyo cilaaqaadka
Ma barbardhigi kartid Barakamon. Iyo taxane gaagaaban, waxay leedahay tayo badan oo ku duuban.
My Hero Academia waa mid ka mid ah anime ugu weyn qarniga 21-aad. Nooca Shounen wuxuu u baahday wax cusub, MHA-na waa jawaabta baahidaas.
Shakugan Maya Shana waa koon weyn oo ay ka buuxaan Denizens, Olol Haze iyo aadanaha oo dhexda lagu qabto.
Waxay leedahay isku dhaf wanaagsan oo ka mid ah cunsuriyada ka sarraysa (iyada oo aan kor laga dhaafayn), animation hufan iyo jilayaal xiiso leh oo leh awoodo xiiso leh.
Xilli kasta waa ka duwan yahay, waana mid guud ahaan indhahayga ku dhex jirta.
26. Eureka Toddoba
Taxane mecha la'aan ah maya isbarbardhiga.
Eureka Toddoba (oo ay sameeyeen Studio Bones) waxay isticmaashaa qarsoodi, tixraacyo kitaabiga ah, jilayaal kala duwan iyo jacayl si ay u sheegto sheekadeeda.
Mana jiraan wax Mecha ah oo dhulka ka fiican oo ka sameeya aaggan (xitaa ma aha Darling In The Franxx).
27. Argagax Birta Buuxda!
Argagax Birta Buuxda waxay qaadataa jacaylka dugsiga sare, waxayna ku darsataa argagixisanimo, ficil, iyo waaqica isku darka.
Tani waa mid ka mid ah anime-yada dhifka ah ee hela xitaa ka sii fiican xilli kasta oo la soo saaray.
28. Kacsiga Geesiga Gaashaanka
Kacsiga Geesiga Gaashaan waa dhawaan taxane anime laga bilaabo 2019. Laakiin waa mid ka mid ah kuwa yar ee Isekai ah ee aan aadka u qiimeeyo.
Naofumi halgankiisii ​​dhabta ahaa ee ka dhanka ahaa heerka labalaabka faraxumeynta galmada, iyo sida loo rumeysan yahay hadalka haweeneyda la'aan caddayn.
Sumcadda joogtada ah ee dabeecaddiisa, dadka badidiisuna waxay diidaan inay 'ka fikiraan' ama su'aal ka keenaan inay run tahay iyo in kale… Ma aha in la xuso xiriirka Naofumi ee Raphtalia (iyo waxyaabo kale)
Geesi gaashaan waa silsilad macno leh sida kuwa kale, waana fuliyaa ka fiican inta anime badan sheegan karo.
29. Qiyaasta Eber
Marka ay timaado anime leh waxyaabo taariikhi ah, Qaddarka Eber ayaa xukuma. Gaar ahaan heerarkeeda waalida ah ee waxqabadka, saxsanaanta iyo madadaalada ah.
Anigu ma dhigi doono taxane kale oo Masiir ah oo ku saabsan Masiirka Qiyaasta, laakiin waa wax aad u tiro badan oo taxane tayo leh ah oo OGOOD sida loo iftiimiyo nooca ficilka.
30. Iskuulka Tooska ah
Iskuulka tooska ah wuxuu umuuqdaa mid quruxsan, laakiin dhab ahaantii waa mid kamid ah qoto dheer waxay ku tusaysaa liiskan. Wax ka qabashada mawduucyada sida cudurada maskaxda, cilmu-nafsiga, dhalanteedka iyo mowduucyada la midka ah.
Sida Madoka Magica, anime wuxuu kugu khiyaaneeyaa inaad u maleyneyso inay tahay taxane xiiso leh illaa ay goori goor tahay inaad dib u noqoto.
Akhriso: 20 Ka Mid Ah Taxanaha Anime Ee Ugu Madoow Oo Kaa Yaabi Doona
Gurren Lagann waa uun a buunbuunin taxane ah. Markaan idhaahdo buun buunin - waxaan ula jeedaa waa firfircooni, qosol, dhiirrigelin iyo in laguu bamgareeyo.
Waan arki karaa halka bandhigyada sida Kill La Kill ay ka qaateen dhiirrigelintooda. Gurren Lagann waligay indhahayga ayay ku ahaan doontaa sida caadiga ah.
32. Sheydaanku Waa Waqti-Wakhti
Sida nolosha masiibada ah ee saiki k, anime-kani wuxuu hal-abuur ku yahay sida uu isagu isula macaamilo. Anime majaajillo yar ayaa dhihi kara inay yihiin kuwo hal abuur leh sida THIS oo weliba madadaalo leh.
Sheekadu waa mid aad u qosol badan oo aan qosol ku jirin. Xaqiiqdii waxaan ubaahanahay xilli 2 loogu talagalay Ibliisku Waa Qayb Waqti!
Taxanaha anime ee fikirka ah, oo diiradda saaraya wax aan ka badnayn:
Ka wada shaqeynta xalinta xujooyinka.
Iyo 'baare ciyaaro'.
Dusha sare kama muuqaneyso heer caalami, laakiin sida loo hirgaliyay waa sheeko kale.
34. Hadday Tahay Gabadhayda
Haddii ay Tahay Gabadhayda oo la sii daayay 2019. Aniguna waxaan u galay aniga oo aan wax rajo ah ka qabin.
Qeybta ugu horreysa waxay ka bilaabmaysaa Dale oo helay ilmo jinni ah oo duurka ku jira, oo qoyskiisa la dilay.
Wuxuu korsaday gabadhan oo wuxuu ugu magac daray 'Latina', waana halkaas meesha cinwaanka anime ka soo jeedo.
Waa a jeex dabacsan oo nolosha ah oo leh qaybo badan oo diirran oo astaamaha ugu waawayn ay isku xidhayaan, xidhiidhkooduna sii kordhayo.
Goobtu ma ahan wax qaas ah, mana aha anime-yada ugu iftiimaya sidaa darteed ma xiiseyn doonto qof kasta oo uga sii badan Shounen. Laakiin maxaa keenaya - Hadday Tahay Gabadhaydu waa sida ay u faraxsan tahay sida ay u hesho.
Waxay leedahay dhinacyo shucuur leh sida Violet Evergarden.
35. Safarada Kino: Dunida Qurxoon
Safarada Kino: Dunida Qurxoon waa taxane anime ah oo wax uun si fiican u qabata: sheekooyin sheeg.
Kino waxay ku safraysaa adduunka mootadeeda, iyadoo aan ka badneyn 3 maalmood waddan kasta.
Dusha sare ee anime-kani wuxuu muujinayaa aragti qoto dheer oo ku saabsan aadanaha iyo sida aan u nool nahay, korka maskaxda iyo cilmu-nafsiga ee ka dambeysa dhaqamada kala duwan ee aan ku nool nahay.
Si fudud mid ka mid ah anime ugu weyn waqtiga oo dhan.
36. Kokoro Isku xira
Kokoro Connect looma kala saarin taxane 'cilmi-nafsi' ah, laakiin sidee loo sawiray? Waa hubaal yahay.
Qeyb ka mid ah nolosha iyo jacaylka dhinac, anime-kan ayaa kaa dhigi doona inaad u maleyso inaysan jirin bandhig kale oo noociisa ah. Waxyaabaha ay ka mid yihiin waxa loogu yeero asxaabtaada “dhabta ah” waxay kaa fekerayaan markaad ka hadlayso dhabarkaaga dambe. Ama waxa ay 'kaa fikirayaan' adiga guud ahaan.
La xiriira: Liis ka kooban 30 Anime oo cilmi nafsi ah oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso
37. Ogaysiis Dhimasho
Kadib markaan daawaday Xusuusin Geerida sanadkan (2019) Waan arki karaa sababta anime u yahay lagula taliyay dad aad u tiro badan.
Waxaan iska ilaaliyaa bandhigyada la buunbuuninayo, laakiin dhalaalka shirqoolka, jilayaasha iyo dhinacyada nafsiga ah waa mid aan cillad lahayn.
Waxaan siinayaa Xusuusin Geerida 10/10. Waa mid ka mid ah anime ugu fiican waqtiga oo dhan.
Shirobako waa anime DHAMMAAN taageerayaashu waxay u baahan yihiin inay arkaan.
Waxay ku saabsan tahay warshadaha anime-ka oo si dhab ah u qaata waxa ka dhacaya daaha gadaashiisa.
Culeyska shaqada ee buuqa leh, animators-ka, istuudiyaha iyo shaqaalihii oo shaqo badan laga qabtay. Jadwalka, sida anime loo sameeyo, loo jiheeyo, loona abuuro…
Ma heli doontid hal faahfaahin oo ka maqnaanaya geedi socodka waxa anime u galaya Japan.
Ma aha oo kaliya macquul in kastoo, waa xalaal illaa inta tayada iyo madadaalada aad ka hesho Shirobako.
Dhab ahaantii mid ka mid ah anime ugu fiican ee 2010 ee.
Sakura Quest waa hoos loo qiimeeyay jeex taxane nolosha ah. Dib loogu sameeyay 2017 Haddii aanan khaldamin.
Waa iskudhaf wanaagsan oo dalxiis, ganacsi, majaajilo khafiif ah iyo sheeko macno leh oo socotaa bilow ilaa dhamaad.
Liiskani sax ma ahaan lahaa la’aantiis!
40. Kenichi: Xertii ugu xoogga badnayd
Kenichi isaga ayaa isku xilqaamay inuu ku tababaro fanka dagaalka, isaga oo siinaya awood uu iskaga difaaco oo uu dib ugula soo noqdo kalsoonidiisa.
Adduunyada xoogsheegashada maalin kasta ka dhacdo, anime-kani waa mid dhiirrigelin leh. Gaar ahaan dhalinyarada.
41. Ilaaliyaha ruuxa xurmaysan
Waxaan jeclahay anime leh dareen 'taariikh' ah oo ku lifaaqan.
Ilaaliyaha Ruuxa Xurmaysan wuxuu ku saabsan yahay amiir la dayacay iyo ilaaladiisa dumarka ah.
Wax soosaarka IG ayaa mar kale is muujiyey (waxay sameeyeen Psycho Pass).
42. Dagaallada Cuntada
Waa maxay anime ee aad ogtahay in ay qaadato cuntada, oo lagu daro ecchi adoon nacas iska dhigin?
Dagaallada Cuntada waxay ku badan yihiin nooca 'cuntada', haddii taasi xitaa tahay wax.
Ma arki doontid hal abuur badan, Shounen u gaar ah oo qaada marin aan caadi ahayn sida Dagaallada Cuntada.
Waxay u qalantaa dhammaan guusha ay heli karto.
43. Xadhig cilmiyeed cayiman
Xigasho: Mikoto Misaka
Railgun, oo la mid ah Hinamatsuri, wuxuu diiradda saarayaa laba shay isku mar.
Qaybo nolosha ka mid ah.
Ficilku wuu jiran yahay, goos gooska noloshiisana waa la qaboojiyey.
Iyo inta aan ku jirno mawduuca: Railgun waa wax badan oo anime ka fiican Index Magical.
D. Grey Man waligiis wuu dareemay kala duwan aniga. Inta badan Shounen waa uun… Shounen.
Waxaa jira macno ahaan 1000's oo ka mid ah Shounen's maxaa yeelay nooca ayaa ka buuxa BS.
D. Grey Man waa mid ka mid ah kuwa faro ku tiriska ah ee istaaga oo aan ka siibaynin bandhigyo kale oo wanaagsan oo tayo la mid ah leh.
Code Geass waa taxanaheyga # 1 Mecha / action anime, abid.
Xeeladaha xariifka ah, jilayaasha istiraatiijiga ah, naxariis darada Lelouch… Waxaa jira waxyaabo badan oo halkan lagu magacaabi karo marka loo eego sababta Code Geass uu u yahay mid aad u qurux badan.
Laakiin hal shay oo muuqda waa astaamaha istiraatiijiyadeed ee 'chess-like' ah.
Lelouch wuxuu u maleynayaa 5 talaabo oo madaxa ah wuxuuna sameyn doonaa wax kasta oo ay u baahan tahay si loo yareeyo wixii dhibaato ah ee ku soo kordha dagaalka.
Waxa kale oo jira waxyaabo isku mid ah oo u dhexeeya Lelouch Lamperouge iyo Light Yagami oo ka socda Xusuusin Dhimasho !.
46. ​​Fasalka Dilista
Taxane kale oo cusub oo ku saabsan 'iskuulka' nooca anime.
Isbarbardhiga tan anime-gaaga casriga ah ee dugsiga waa cay. Sababtoo ah waa mid aad u gaar ah qaabkeeda iyo dabeecadda ugu weyn: Koro Sensei waxaa loo qoray si ka fiican inta badan astaamahaaga caadiga ah maalmahan.
Goobtu lafteedu waa asal waxna uma eka wax kasta oo aad isku dayi karto inaad isbarbar dhigto.
Mid ka mid ah waxa aan aad u ixtiraamo ee ku saabsan Samurai Champloo waa sida ay isugu milmayso dhaqanka Samurai iyo hiwaayadaha Hip Hop.
Kama fikiri karo anime kasta oo sidan sameeya. Iyo 3da jilaa ee ugu waawayn midba midka kale wuu ka duwan yahay, taas oo ka dhigaysa mid kasta oo ka mid ah mid sahlan in la xasuusto.
Samurai Champloo waa mid heer sare ah.
Kaizaki Arata, waa 27 jir NEET waxaa la siiyay fursad kale oo uu 'dib ugu sameeyo' noloshiisa. Isaga oo siinaya fursad uu ku saxo qaladaadkiisa, iyo inuu isagu wax uun sameeyo.
ReLife waa taxane kale oo la yaab leh oo cusub oo iskuul ah oo si hoose loo qaddariyo.
49. Ka boodi garaacista!
Skip Beat waa dheeman qarsoon dadka badankood ma arkaan dhalaalka. Ka dib oo dhan - waxay leedahay fanbase, laakiin waa maya caadiga ah.
Waxay ku saabsan tahay gabadha ka aargoosaneysa saaxiibkeedii hore oo u adeegsaday shaqadeeda adag, lacagteeda, iyo nacasnimada si uu ugu guuleysto xirfadiisa jilitaanka. Kaliya in iyada laga qodayo sida iyadu aysan sh * t ahayn.
Waxaan la xiriiraa dhiirigelinta aargudashada. Laakiin tayada anime ay keento maxaa yeelay ujeeddadan awgeed ayaa i qarxisay.
Kama dhigayaan riwaayado jacayl ah sida tan oo kale.
La xiriira: Liiska kama dambaysta ah ee Skip Beat xigashooyin aad la xiriiri karto
Charlotte waa uun a gaar ah taxane ah. Waxay qaadataa fikradda caadiga ah ee awoodaha waaweyn, waxayna ku rogtaa madaxiisa.
Halkii dabeecad kastaa yeelan lahayd awood aan xad lahayn, waxaa jira xaddidan waxa ay sameyn karaan. Iyo xitaa hoos u dhac ku yimaada adeegsiga awooddooda, taas oo ka dhigaysa mid macquul ah oo ka fudud bandhigyada la barbardhigi karo.
La xiriira: Waa maxay sababta Charlotte ay u tahay taxane caan ah oo Anime ah
51. Aqoonyahan yar oo Witch ah
Haddii aan waligay helo fursad aan ku noqdo 'caruur' mar labaad, kani waa anime aan daawan lahaa.
Ma jiro adeeg faneed.
Majiro adeeg faneed 'isku day' ah.
Ma jiro qallooca BS.
Ecchi ma jiro.
Asal ahaan: dhammaan ereyada aad ka heli karto taxanaha la midka ah kama jiraan LWA.
Studio Trigger naftooda wey ka sarreeyeen, anime-na waxay u qalantaa aqoonsi ka badan inta ay hadda heshay.
Ma jiraan wax la mid ah dugsigii hore ee 90's anime. Gacan ku dhiiglayaashu waxay ku socdeen wadiiqadooda, waxayna u waxyooday 'dabeecadaha adag ee dumarka' ee dabeecadaha aad ku aragto bandhigyada casriga ah.
Waxaan ugu yeeraa qaabkii hore ee dugsiga ee Fairy Tail (oo aan lahayn adeeg faneedka). Waa bedel wanaagsan oo loogu talagalay taageerayaasha DBZ.
tobanka animes ee ugu sareeya waqtiga oo dhan
Taxane kale oo duug ah ayaan ka caawin kari waayey ku darista liiskan. Qaar ka mid ah sawiradii hore iyo naqshadihii iskuulka ayaa ugu cadcad ilaa maantadan.
In badan kama hadlo Inuyasha, laakiin wali waa la jecelyahay iyadoon loo eegin.
Waxay asal u tahay waqtigeeda, Isekai-na la'aantood iskama mid ahaan lahaayeen Inuyasha .
K-On waa boqorka iyo boqoradda 'Moe' sidaan ognahay. Laakiin taasi maahan waxa ka dhigaya anime-ka in la xuso.
K-on waa taxane caan ah oo aan lahayn qorshe dhab ah, laakiin leh jilayaal madadaalo iyo dhacdooyin ku filan oo ka dhigaya mid qiimo leh.
Majaajillada ayaa ka mid ah ugu fiican Waxaan ku arkay taxane anime ah, oo xitaa ma tixgelin doono K-On 'adag' majaajilo.
55. Cunto cun
Soul Eater ayaa si aad ah ugu hoosaysa nooca Shounen. Inta jeer ee barnaamijkani waligii ku soo bixin wadahadalka waa wax lala yaabo. Sababtoo ah anime lafteeda waa waxaan ugu yeeri lahaa 'guud ahaan' guusheeda.
Waa tusaale kowaad waxa taxane Shounen 'weyn' ah oo u eg gabar (iyo lab) jilaa. Iyo taageerida jilayaasha leh doorka lab + dhedig.
56. Kamuy Dahab
Kamuy Golden waa taxane naadir ah oo ku saabsan dabeecaddiisa taariikhiga ah. In yar oo anime ah ayaa si qoto dheer ugu dhaadhaca taariikhdooda sida Golden Kamuy, oo muujineysa tartan hore oo Jabaan ah oo la yiraahdo: Ainu.
Xaqiiqda ah in Kamuy Dahab ah uu madadaalo ka dhigayo isagoo aan aqoon badan lahayn waxay ka dhigeysaa madadaalo iyo xiiso daawasho.
Akhriso: 12 ee Anime ugu Weyn ee Ku Saabsan Dhaqanka Japan
57. Meel Ka Dheera Caalamka
Haddii aad si fiican ii garaneyso - waad ogaan doontaa aniga ma istaagi karo daawashada anime ee qaybta hoose. Waxaan jeclaan lahaa inaan daawado la iigu magac daray iskana ilaali inaad si isku mid ah u akhrido subtitles-ka.
Laakiin Meel Ka Dheera Caalamka aad ayaan u xiiseynayay waxaan ku daawaday nooca asalka ah. Aniguna tayada ayaa i afuufeysa.
Waa mid ka mid ah taxanihii ugu xiisaha badnaa ee soo noqnoqda ee lagu sii daayo 2018.
U yeerista 'dhiirrigelin' waa yarayn.
58. Yona Of The Aroortii
Yona Of The Aroortii waa anime marwalba aan doonayay inaan daawado. Waan ku faraxsanahay inaan sameeyay.
Si uun Yona Of The Dawn waa riwaayad, taxane ka sarraysa oo majaajillo ah oo aad u cusub (iyo nacasnimo) in ay tahay wax lala yaabo. Gaar ahaan dusha sare ee dhammaan ficillada, jacaylka mararka qaarkood iyo goobaha dagaalka mararka qaarkood.
Hadda waxay u baahan tahay xilli 2!
59. Dil La Dila
Waa aan macquul ahayn sida taxanaha Ecchi u noqon karo ficil lagu soo buuxiyay sheeko si wanaagsan loo qoray.
Waana sababta Kill La Kill u burburiyey filashadaydii liidatay oo uu xiisihii u qabtay.
Studio Trigger ayaa iskood isugu soo baxay tan. Had iyo jeer waxay noqon doontaa mid ka mid ah anime-kayga ugu sarreeya waqtiga oo dhan.
La xiriira: Liiska Ugu Dambeeya ee Dilka La Dila Quotes
Marnaba kuma fikirin 'Shoujo' anime inay noqon karto madadaalo. Waana halka aan ku qaldamay.
Ka dib markii aan u orday anime sida Nana oo kale, oo ay soo saartay Madhouse, ma rumaysan karo sida dhabta ah ee ay u awood badan tahay taxanahan jacaylku.
Naqshaduhu waa 'run nolosha', astaamuhuna aad bey uga wada hadli karaan dhinacyo badan.
Jacayl yar ayaa ugu soo dhowaada tan xaqiiqdeeda.
La xiriira: Liiska Ugu Dambeeya Ee Jeex Nolosha Anime
61. Aria Animation-ka
Habka ugu wanaagsan ee lagu sharxi karo anime-kan ayaa ah: debecsan, fudeyd badan oo nasasho leh sida qabow oo lagu ag fadhiyo xeebta.
Waa khafiif ku ah majaajillada, laakiin casharrada nolosha ee khiyaanada leh iyo dabeecadda weyn ee diiran ee qalbi furan ayaa tan ka dhigaysa qayb ka mid ah taxanaha nolosha ee taageerayaashu waligood seegi doonin.
Tani waa Ecchi kale taxane burburiyey filashadaydii hooseysay. Oo lagu beddelay qancin.
Shimoneta waa kiniin adag oo loo liqo taageerayaasha badankood, sababta oo ah sida ay ugu daran tahay waxa ay aaminsan tahay, qisada, luqadda iyo ujeedkeeda. Laakiin haddii aad caloosha ku dhejin karto, waad la yaabi doontaa qoto dheerida iyo xitaa majaajillada ah ee anime ay tahay inay bixiso.
Minami-Ke waa hooseeye , jeex nolosha ilaaway iyo taxane majaajillo ah. Waxay ku saabsan tahay 3 gabdhood oo walaalo ah oo isku guri ah, iyo dhamaan shenanigans-ka ay ku kacaan.
Iyadoo 3 xilli guud iyo cliches in ay yihiin runti qosol badan, weligay ma dhex marin dhacdo aan qosol lahayn.
Waxaan ku qiimeyn lahaa 10/10 aniga oo aan ka waaban.
64. Dhulkii Hawiyaha
Dhulkii Damaca waa anime ka dhigaya CGI inuu u ekaado sidii hore. Iyo haddii aad daawatay anime badan, waxaad ogaan doontaa sida xun ee CGI guud ahaan.
Land Of The Lustrous waxay u qaadaysaa heer kale tayada animation-ka. Waxaan dhihi lahaa xitaa way ka fiican tahay Violet Evergarden qaabkeeda.
Sheekada lafteedu waa mid dahsoon laakiin xiiso leh oo kugu filan oo kugu sii wada illaa dhammaadka adigoon dareemin inaad waqtigaagii lumisay.
Waa a weyn taxane leh jilayaal xusuus mudan.
65. Taxanaha Monogatari
Monogatari waa nooc gaar ah oo anime ah xagga dabeecadda ka sarraysa / jinka. It’a waa nooca anime ee ay ka buuxaan wada hadalka iyo sheekooyinka “sheekaysiga ah”, sidaa darteed waxay dadka qaar u jeedin kartaa inay iska jeestaan.
Laakiin haddii aad ku dhegto oo aad gaarto qaybaha wanaagsan, waxaad ogaan doontaa sida fekerka kicinta iyo xiisaha leh ee anime-ku u noqdo.
Oo ay la soo saaray Studio Shaft, animation iyo kala guurka u dhexeeya Muuqaallo waa qurux.
Waa gabayo dhaqaaq ah.
Nisekoi waxaa sidoo kale soo saaray istuudiyaha Shaft, sida Madoka Magica iyo Monogatari.
Tani maahan sida anime-gaaga caadiga ah ee sharmuutaha ah oo ay ka buuxaan cliches iyo koobab doqonimo ah oo ay tahay adag in si dhab ah loo qaato.
Nisekoi waa taxane tayo leh oo leh astaamo u qalma oo ka dhigaya anime-ka oo dhan iftiinka sida geedka kirismaska ​​bisha Diseembar.
“Farshaxanka” waa sharci.
Haddii aad rabto inaad daawato qayb ka mid ah taxanaha nolosha oo leh waxyaabo badan oo qoto dheer oo ku saabsan jilayaasha, iyo farriimaha fekerka kicinaya - Oregairu waa kan la arko.
Ku dhowaad midna jilayaasha taxanahan si fiican looma qorin. Jilayaasha ugu waaweyni waxay qiimo badan ku hayaan sheekada guud, iyo farriimaha mararka qaarkood “qarsoon” dusha sare.
Waxaan dareemayaa in Oregairu uu yahay mid aan la garaneyn oo dadka ku filan aysan aad uga qeylin. Inkasta oo si heer sare ah loo qiimeeyo.
Maahan Non Biyori.
23 Ka Mid Ah Khudbadihii Ugu Wanaagsanaa Ee Waqtiga oo dhan
lambarka hal anime ee waqtiga oo dhan
afsoomaali wanaagsan oo loogu magac daray anime si aad u daawato